लकडाउनमा गरिब दुखि भोकै हुन्छन भन्दै कुमारले चामल बाँडे,अचानक जुत्ता देखाउदै किन आक्रोशित भए कुमार ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
लकडाउनमा गरिब दुखि भोकै हुन्छन भन्दै कुमारले चामल बाँडे,अचानक जुत्ता देखाउदै किन आक्रोशित भए कुमार ? (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki March 28, 2020
अभियानको लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक ३२५ एवानको नेतृत्वमा समेत रहनु भएका लोकतान्त्रिक व्यवसायी संघ दमकका अध्यक्ष बबरजंग थापा किरणले थालनी गरेका छन् ।सहयोगी दाताहरुले खाना खाएर दिएको पैसा कुमार राइले दुवै मिर्गौला फेल भएर उपचार गर्दै गर्नु हुने बिरामीलाई काठमाडौँ पठाईदिनु भएको छ । हाल केहि कारणले गर्दा यो काम रोकिए पनि कुमार राइ समाज सेवाको काममा सक्रिय भएर लागेका छन् । हेर्नुस कोरना भाइरसका कारण नेपालमा अहिले लकडाउन भएपछि दिनरात मेहेनत गरेर खाने नेपालीलाई अठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। कुमारलोए भाबुक हुदै गरिब दुखिलाइ आफ्नै घरमा बोलाएर यसरि चामलका बोरा बढिरहेका छन् ।
पोखरामा र्‍याप गीत मार्फत चर्चा कमाउदै आएका हाकुको कथा -भिडियो...